Soomaali laga soo bad-baadiyay dhibaatada Libya oo dib ugu soo noqday Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Soomaali laga soo bad-baadiyay dhibaatada Libya oo dib ugu soo noqday Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyay qaar ka mid ah tahriibayaashii Soomaaliyeed ee ku dhibanaa gudaha dalka Libya, kuwaas oo sida la sheegay tiro ahaan gaaraya illaa iyo 11-qof.
11-kaas qof ayaa waxaa ku jira caruur iyo haween oo ay wajiyadooda ka muuqdeen duruuftii adkeyd oo ku haysatay dalkaasi Libya.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo ay wehliyaan, wasiiro katirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaano matalayay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale mas’uuliyiin kale oo katirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahaa dadkii garoonka kusoo dhaweeyey muwaadiniintaan Soomaaliyeed ee maanta dib uga soo laabtay magaalada Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay inay dadaal xoogan ku bixin doonto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalka Libya, ay dib ugu soo celin lahayd dalkooda Soomaaliya.
Arrintaasi ayaa u muuqata mid ay dowladda Soomaaliya ka dhabeeysay, islamarkaana natiijada dadaalkaasi uu keenay in maanta dadkaasi qaarkood dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan dalka Libya u dirtay wafdi ka shaqeeya qaabkii dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalkaasi Libya dib loogu soo celin lahaa dalkooda Soomaaliya, waxaana sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda Soomaali kale dib loogu soo celiyo Muqdisho.